VeZanu-PF neMDC Votumira Nhumwa kuSADC
VeZANU-PF neMDC avo vari kunetsana zvakanyanya munyika, vave kutumira nhumwa kumusangano wakakosha zvikuru weSADC summit uyo uri kuitwa mukupera kwesvondo kuti vayedze kutsvaga rutsigiro.
Nhumwa dzeZanu-PF dzinoti Professor Jonathan Moyo, VaTafataona Mahoso, VaVimbai Chivaura, Amai Oppah Muchinguri, Amai Sandi Moyo naVaChristopher Mutsvangwa, dzatopinda muJohannesburg neMugovera kuti dziite hurukuro nevakuru veANC nemamwe masangano akazvimirira oga..
MDC-T iri kutarisirwa kuti itumire VaNelson Chamisa naVaJameson Timba neChina kunoyedza kutsvaga rutsigiro.
Zanu-PF iri kuda kuyedza kuti SADCisiyane nekutaura nezvehurukuro yeSADC troika yekuLivingstone zambia iyo yakashora bato iri nenyaya yemhirizhonga uye kukurudzira kuti paitwe hwaro hwesarudzo hwakajeka.
Bato reZanu-PF riri kuda kuti SADC iti MDC-T ndiyo iri kukonzera kusagadzikana kwenyika uye haisi kuda kuti nyaya yekuvandudzwa kwemauto ikandwe mugango.
Asi MDC inoti vatungamiri veSADC havafanire kuruma vachifuridzira panyaya yeZanu-PF yekutonga nedemo. Uye MDC-T inoti zvose zvakatarwa kuLivingstone zvinofanira kutedzererwa.
Asi chipangamazano chemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, muzvare Lindiwe Zulu, vanoti musangano weSADC summit unogona kunonotswa nenyaya yekuti VaZuma vanenge vachitungamira kuvigwa kwaamai Albertina Sisulu.
VaGoodson Nguni vari kutsigira Zanu-PF kumusangano uyu vanoiti MDC ndoirikuita mhirizhonga.
VaDewa Mavhinga vekuCrisis in Zimbabwe Coalition vanenge vachipikuisa Zanu-PF kumusangano uyu vanoti Zanu-PF iri kuhwanda nemumwe.